मध्यवर्ती क्रेडिट भनेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki पुल ऋण
विशेष गरी यो सानो तर पनि ठूलो वित्त पोषण, एक गर्न सक्छन् जब पुल ऋण सार्थक। तर यसको अर्थमा के मतलब छ? कुन चासोको आशा गर्नुपर्छ? यो तथ्य यो हो कि बाधाहरु एक ठूलो भन्दा एक मध्यवर्ती ऋण प्राप्त गर्न धेरै अधिक छन्। यदि एक सानो रकम पहिले नै छ, तर कुनै समय यदि एक अंतरिम ऋणले अर्थ बनाउँछ। त्यसैले यदि मालिक मालिकले अन्तमा अपार्टमेन्ट खाली गर्न आग्रह गर्दछ भने, यस्तो मध्यवर्ती ऋण, आदर्श समाधान पाउन सकिन्छ।
यस ऋणको साथ उच्च रकम पनि सम्भव छन्
जब यो उपलब्ध गराईएको रकमहरूको लागि, यो उल्लेखनीय छ कि तिनीहरू 50.000 यूरो सम्म जान सक्दछन्। यसको मतलब यो पनि सानो कन्डोमियम, वा कम्तिमा उनीहरूको तल भुक्तानी पनि यस्तो ऋण संग तिर्न सकिन्छ। यी असीमित कर्जाको अर्को लाभ भनेको छ कि ती चाँडै प्रतिज्ञा गरिएको हुन सक्छ। छोटो समयमा, इच्छित रकम निर्दिष्ट खातामा छ। यो सर्वोत्तम हो यदि यस्तो असीमित ऋण लागी लागी र अनलाइन पूरा भयो। साथै यो अघिल्लो ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। अनलाइन फारम पूरा गर्न केही मिनेट पछि एक प्रतिबद्धतामा सेट गर्न सकिन्छ। तर यो वास्तविक पैसा हो किनभने, एकसँग हुनुपर्छ क्रेडिट चेक गिन्नु पर्छ। यस्तो असीमित ऋण पनि अवस्थित ऋणको लागि प्रतिपूर्तिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ कि पुरानो ऋण धेरै महँगो भएको छ, त्यहाँ सधैँ यसलाई परिवर्तन गर्ने सम्भव छ। यस्तो ऋण पनि कुनै पनि समयमा बढ्न सक्छ वा अर्को अवधि निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ। अंतरिम ऋण सार्थक छ तर न केवल व्यक्तिगत व्यक्तिहरूको लागि। कम्पनीले इन्िमिम लोनको लचीलापनबाट पनि लाभ उठाउन सक्छ।
थप समय बर्बाद नगर्नुहोस्
ऋण पनि बैंकको साथ व्यापारमा लाग्ने कुनै तरिका देख्नेहरूलाई मौका दिन्छ। किनकि प्रायः लामो वार्ता र अनुकरण कार्य त्यहाँ हुँदैन। आजको कम्पनीको शुरुवात देखि धेरै समय छैन। सबै भन्दा माथि, जो कि एक घर बचत ऋण छ, वा अझै मालिक को चाहना छ, यस मध्यवर्ती ऋण देखि धेरै प्राप्त गर्न सक्छन्। यदि केहि अझै सम्म पहुँच भित्र छैन, तर नियोजन निश्चित छ, समय मध्यवर्ती ऋण संग छोटो हुन सक्छ। यो मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो किनकि यो सधैँ यस्तो प्रकारको क्रेडिटमा भर पर्न सक्छ।
यो सिधै सिधै समाजको समाजको साथ सोध्न सम्भव छ। यो त्यसपछि एक राम्रो ब्याज दर प्रदान गर्दछ। तर यहाँ पनि, कुनै पनि अन्य वित्त प्रस्तावको रूपमा, निर्णय गर्नु अघि पहिले तुलना गर्नुहोस्। त्यहाँ सबभन्दा अघि हुनु पर्छ, एक राम्रो आय हो, साथै साथ योगफल। त्यसोभए 40 प्रतिशत सम्म ऋण द्वारा लिन सकिन्छ। यस्तो ऋण पनि पूर्व वित्तपोषणको रूपमा चिनिन्छ। यो एकदम सम्भव छ कि अंतरिम ऋणको लागि रकम लामो अवधिमा पुन: भुक्तानी गर्न सकिन्छ। चूंकि प्रत्येक ऋण फरक फरक छ, ब्याज र शब्दको कारणले गर्दा पनि बचत चरण बोलाइएको छ। यसले कति मुक्ति दिन्छ वा कति आवश्यक छ निर्भर गर्दछ कि कति पैसा चाहिन्छ। राम्रो कुरा यो हो कि कसैले कुनै जोखिम लिनु हुँदैन। किनकि प्राय: मलहरू सिधा अनलाइन र घडीको वरिपरि गणना गर्न सकिन्छ। यसैले सबैको लागि पर्याप्त समय छ कि विकल्प को विकल्प को बारे मा सोचने को लागि पर्याप्त समय छ।
अघिल्लो लेखक्रेडिट deducting
अर्को लेखराम्रो आचरण अवधि